Goiana : Minisitry Ny Fahasalamana Mivazavaza sy Miteny Amin’ny Mpiaro Ny Zon’ny Vehivavy Hoe ‘Tiany Hofelahana Ny Fitombenany’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2015 5:47 GMT
Nisy rakipeo manelingelina ny saina nifanaovan'ny vehivavy iray mafana fo sy ny Minisitry ny fahasalamana Goiane, niely nanerana ny haino aman-jery sosialy vao tamin'ny herinandro talohan'ny 20 Aprily teo, nampihaotra loha ireo mpisera amin'ny aterineto maro manoloana ny fihetsika asehon'ireo mpitantana ao amin'ny faritra amin'ny vehivavy sy ny fipetrak'ireo mpanao politika manoloana ny vahoaka nifidy azy ireo hanompo azy.
Nanao teny mahery tamin'ilay mpiaro ny zon'ny vehivavy, Sherlina Nageer, izay nitsikera azy tamin'ny ezaka vitany, ny Dr. Bheri Ramsarran, mpikambana ao amin'ny Antokon'ny Vahoaka Progresista izay antoko eo amin'ny fitondrana. Ambony loatra ny tahan'ny reny sy ny zaza maty amin'izao fitondrana izao raha ny fomba fijerin'ilay mpiaro ny zon'ny vehivavy. Nasain'i Ramsarran ‘nanakombona ny vavany’ izy, nataony hoe “adala” sy ‘ vongan-tay’. Avy eo nantsoin'ilay Minisitra ny mpitandro ny filaminana mba hanala an'i Nageer, ary mbola notohizany ny tabatabany tamin'ny filazany tamin'ny mpanao gazety fa ” tiany ho felahana ny fitombenany”[…] vazivazy ihany izany. — fandrahonana izay tsy nasian'ny ankamaroan'ny Goiane sira, indrindra eo amin'ny resaka hamaroan'ny herisetra ara-nofo sy ny herisetra an-tokantrano manjo ny vehivavy. Vao haingana ireo vondronà vehivavy ireo no tena nampiaka-peo momba io resaka io, ary fantatra tsara fa i Nageer no iray amin'ireo mpiaro sy mpisolo vava tena mavitrika ho an'ny zon'ny vehivavy.
Ity kaontin'ny zava-mitranga momba ny vaovao ao amin'ny tranokalan'ny News Source ity dia nilaza fa na dia nanandrana ny nanala baraka an'i Nageer aza ny minisitra dia nijoro izy :
Nohizingizinin'ny minisitra tamin'ny adihevitra mafana nifanaovany tamin'i Nageer fa ” vitsy kokoa ny zaza amam-behivavy maty noho ny tamin'ny andron'ny PNC [People's National Congress, ilay antoko politika iray matanjaka any Goiana ]”. Notsikerain'ny Code Red ny fiarovan-tenan'ny minisitra :
Nolazain'ny Code Red ireo tranga maron'ny fanitsakitsahana zon'ny vehivavy manerana ny faritra, tamin'ny fitakiana ny ” mpitondra fanjakana mba hamaky bantsilana ireo herisetra na aiza na aiza misy izany” sy ” ireo mpanao politika manerana ny faritra [mba hahatsapa] fa mahalaza betsaka amin'ny andraikiny amin'ny firotsahany amin'ny resaka maha-lahy na maha-vavy sy ny zon'ny vehivavy ny fahanginan-dry zareo amin'ireo fandikàn-dalàna ataony amin'ny mponina ireo.”:
Nanomboka nanao fangatahana amin'ny aterineto ho firaisankina amin'i Sherlina Nageer sy ireo rehetra mpiaro ny zon'ny vehivavy ilay bilaogy.
Niteny ny momba ilay zava-niseho ihany i Nageer ny farany, ary nolazainy fa ” tsy mbola voaozona tahaka izany izy” ary nasongadiny ireo tranga maro amin'ny tsy fahombiazan'ny Ministeran'ny Fahasalamana amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka :
Tsy raharahan'ny olona ny fiarovantenan'ilay Minisitra izay nilazàny fa nanenina tamin'ny fihetsiny izy (izay nohamafisiny fa noranitina izy). Niaraka niseho ny hetsi-panoherana tao amin'ny aterineto sy ny teny an-kianja ho fanohanana an'i Sherlina Nageer.